🥇 Ukubalwa kwezimali kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 718
Ividiyo yokubalwa kwezimali kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo
Oda ukubalwa kwezimali kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo
Uma udinga ukwandisa ikhwalithi yokubalwa kwemali nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo, landa bese ufaka izixazululo eziyinkimbinkimbi ezivela eqenjini lokuthuthukisa le-USU Software. I-USU Software ikulungele ukukunikeza isoftware esezingeni eliphakeme futhi ngasikhathi sinye ibiza inani elifanele kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uhla lwezinsiza zethu lapho uthenga ilayisensi yesoftware yokubalwa kwemali nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo kufaka phakathi isifundo esifushane sokuqeqeshwa nosizo ekusebenziseni umkhiqizo owuthengayo. Lezi yizimo ezihambisana nalokho okuhle, okusho ukuthi kufanelekile ukwenza ukukhetha okuvumela ukubalwa kwezimali nokuhlaziywa kwesoftware yethu yokukhiqiza imfuyo.
Ukubalwa kwemali kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo kwenziwa ngokungenaphutha uma uthinta iqembu lethu labahleli. Sizokunikeza uhlelo lokuhlaziya oluqoqa futhi lucubungule ulwazi mayelana nokukhiqizwa kwemfuyo, kanye nokubalwa kwayo, bese kuthi, lolu lwazi lutholakale kubasebenzi abanamalungelo afanele okufinyelela ohlelweni.
Ku-software yethu yokubalwa kwemali nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo, kunenketho yokwehlukaniswa kwemisebenzi ngezinga lokungeniswa. Isibonelo, uma uchwepheshe ojwayelekile enza izinto zakhe ohlelweni, bazokwazi ukusebenza kuphela ngeqoqo elilinganiselwe lemininingwane abakwazi ukufinyelela kulo. Lesi setha solwazi sinqunyelwe kumininingwane eminingi lapho umuntu onikeziwe edinga ukuxhumana phakathi kwenqubo yokukhiqiza. Izinyathelo ezinjalo zokubalwa kwemfuyo zikuvumela ukuba ube umholi ngokushesha emakethe, ube usomabhizinisi ophumelela kakhulu.
Uzokwazi ukuhlala ngokuqinile ezimakethe ezamukelekayo kakhulu, ususe bonke abancintisana nabo futhi udale amazinga aphezulu wenzuzo esikhathini esizayo. Ekuphathweni kwezimali nasekuhlaziyweni kokukhiqizwa kwemfuyo, inkampani yakho kufanele ihole ngenxa yokuthi izinga lokuqwashisa kwabantu abanesibopho lizoba likhulu kakhulu. Ngakho-ke, izinqumo zokuphatha kumele zenziwe ezingeni elifanele lekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwesakhiwo sethu kwenza sikwazi ukutadisha imibiko ehlukahlukene.
Isoftware ikhiqiza imibiko yekota noma eminye imibhalo. Kuzodingeka wazijwayeze kuphela ngolwazi olunikezwe ukuze uthole iziphetho ezifanele. Uma wenza ukubalwa kwezimali kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo, awusoze wakwazi ukwenza ngaphandle kwenkimbinkimbi yethu. Le software ihlangabezana nemibandela yekhwalithi elawula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, sikhokhisa inani elifanele kakhulu ngesakhiwo esakhiwe kahle kangako.
Uzokwazi ukusebenzisa amagrafu athuthukile namashadi wohlobo lwakamuva. Ukusetshenziswa kwabo kukuvumela ukuthi ufunde ngokushesha imininingwane enikeziwe yesimo samanje. Kumashadi, ungakhubaza amagatsha ngamanye, futhi kumashadi, ungavimbela amasegmenti. Izinyathelo ezinjalo zikuvumela ukuthi ufunde ukubikwa okutholakalayo ngendlela enemininingwane eminingi. Ukukhiqizwa kwemfuyo kufanele kube ngaphansi kokugadwa okuthembekile, futhi uzokwazi ukunikeza ukubaluleka okufanele ekuzalaneni kwemfuyo.
Uma ubandakanyeka ekukhiqizeni ukukhiqizwa kobisi, okuyinkimbinkimbi yethu yokubalwa kwezimali nokuhlaziywa kuzoba ithuluzi elifanele kakhulu. Ngenxa yemagazini esezingeni eliphakeme yedijithali evela ku-USU Software, uzokwazi ukuthekelisa imibiko. Lo msebenzi ungenziwa kusetshenziswa ithuba lokusebenzisa amasevisi wefu. Imininingwane edingekayo izogcinwa kwimidiya ekude, okusho ukuthi ngeke ithathe isikhala esiningi kwi-hard disk yekhompyutha yomuntu siqu
Sikhokha ukubaluleka okufanele ekukhiqizweni kokuzaliswa kwezilwane, ngakho-ke, sidale indawo ekhethekile yokuhlaziywa kwezinqubo zokukhiqiza. Uma usebhizinisini lokukhiqiza, ukubalwa kwezimali kufanele kwenziwe ngokungenaphutha. Faka umkhiqizo wethu oyinkimbinkimbi kumakhompyutha wakho futhi ungabhekani nobunzima ngokulawulwa komsebenzi wasehhovisi. Uzokwazi ukusebenzisana nokusetshenziswa kwephrinta. Ngosizo lwale mini-program, kuzokwazi ukuphrinta uhla lwamadokhumenti nezithombe ezidingekayo. Noma usebenza namamephu womhlaba, ungaphrinta futhi, ugcine zonke izindawo ezimakiwe nezinye izinto ezisemfanekisweni.
Kwezokukhiqiza, uzoba phambili, futhi uzobandakanyeka kahle ekuphatheni accounting kwezilwane. Ukukhiqizwa kungalawulwa kahle, futhi ukuhlaziywa kwazo zonke izinqubo ezenzeka ngaphakathi kwenhlangano kuzokwenziwa ngokungenaphutha. Ngalezi zinhloso, udinga kuphela ukusebenzisa izinsiza ze-USU Software, isiza sethu sidlula kakhulu cishe zonke izifaniso ezaziwayo ngokuya ngentengo nekhwalithi.
Ngokuthenga isoftware, uthola uhlelo lwekhwalithi ephezulu olusiza ukuthi uzulazule ngokushesha kunoma yiluphi uhlobo lomsebenzi wasehhovisi. Yenza ukubalwa kwemali nokuhlaziywa kwazo zonke izinqubo ezenzeka ngaphakathi kwebhizinisi usebenzisa amathuluzi azenzakalelayo. Ngokusebenzisa isixazululo sethu esiphelele, uzokwazi ukurekhoda futhi uhlaziye ukulawulwa kokukhiqiza ngaphandle kobunzima. Lonke uhla lwezinto zokwaziswa luzowela ezandleni zalabo bantu abanegunya elifanele lokukucubungula. Uzoba nayo ithuluzi eliqine kakhulu lokuhlaziya imfuyo ukuze ufunde imibiko enemininingwane. Ngaphezu kwalokho, le software inobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu bokwakha ukubika okwanele kakhulu. Ngenxa yohlelo lwethu oluphambili lwe-accounting kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo, inkampani yakho kufanele ikwazi ukuhola emakethe. Kuzoba nethuba lokulwa ngokulingana nabaphikisi.
Ngenxa yokutholakala kolwazi olusesikhathini kanye nokwabiwa okufanele kwezinsizakusebenza, uzokwazi ukwakha inqubomgomo yebhizinisi efanele.
Ukufakwa kwenkimbinkimbi yethu yokubalwa kwemali nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo kuyinkqubo eyenziwa ngosizo lochwepheshe be-USU Software. Lapho uthenga ilayisense yalolu hlobo lwesoftware, ungathembela kosizo oluphelele lobuchwepheshe oluvela eqenjini le-USU Software.
Ngeke nje sikunikeze isifundo esifushane sokuqeqeshwa kepha sizokusiza nokuthi ufake uhlelo lokubala nokuhlaziya imfuyo kumakhompyutha wakho.
Ngosizo lwamalungu eqembu lethu, ukucushwa okudingekayo kuyasethwa, kanye nemingcele yokuqala efakwe kwimemori ye-PC. Uzokwazi ukubhekana nokubalwa kwemali nokuhlaziywa komkhiqizo ngaphandle kobunzima ngoba ubuhlakani bokufakelwa buzokwenza usizo oludingekayo. Sebenza ngamamephu womhlaba ukuze ulandele ama-oda ahlukahlukene. Kuzokwazi ukumaka isimo sabo futhi basebenze nalezi zinkomba zolwazi. Ungalanda futhi inguqulo yamahhala yesakhiwo sethu sokuphathwa kwemfuyo, esakhelwe ngqo ukubalwa kwemali nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo. Uhlelo lwe-demo lunikezwa mahhala, kepha aluhloselwe nganoma iyiphi indlela ukusetshenziswa kwezentengiso.
Ungakwazi ukuzijayeza ngokuzimela nangokugcwele ngokusebenzisana nokuqukethwe kokusebenza kwale software. Ukwenza isinqumo sokuphatha mayelana nokuthi uyayidinga yini le software noma ukuthi kufanele wenqabe ukuyithenga kuzoba sezandleni zakho ngokuphelele. Uma uthatha isinqumo sokufaka uhlobo olunelayisense lohlelo lokusebenza oluphambili lwe-accounting kanye nokuhlaziywa kokukhiqizwa kwemfuyo, ungasebenza ngokubambisana nesisekelo samakhasimende. Uzoba nethuba elihle lokuphendula njalo imibuzo yamakhasimende akho futhi usebenze ngezikhalazo ngokuxhumana nolwazi olugcinwe kwi-hard drive yekhompyutha yakho.